Shan arrimood oo ku saabsan sidii loo dilay madaxweynihii hore ee Maraykanka - BBC News Somali
Shan arrimood oo ku saabsan sidii loo dilay madaxweynihii hore ee Maraykanka
31 Oktoobar 2017
Image caption JF Kennedy waxa uu ahaa madaxweynihii Maraykanka ee loogu jeclaa, waxaana la dilay 50 sano ka hor
Dilkii qaarijinta ahaa ee loo geystay madaxweynihii hore ee Maraykanka John Fitzgerald Kennedy ayaa waxa ay ahayd dhacdadii ugu naxdinta badnayd ee dhacday qarnigii 20-aad.
Trump oo fasaxaya faylasha dilkii JF Kennedy
Image caption Kennedy iyo xaaskiisa Jackie wax yar ka hor intii aanan madaxweynaha la dilin
Image caption Lee Harvey Oswald waxa uu ahaa ninkii loo qabtay dilka Kennedy, balse labo maalmood kadib ayaa lagu hor dilay warbaahinta horteeda
Waxa uu guddiga sheegay in aysan jirin wax la qariyay iyo cid kale oo soo qorsheysay dilka, balse waxaa mar kasta jiray su'aalo badan oo aanan laga jawaabin, waxaana shakiga sii kordhiyay maadaamaa lagu jiray dagaalkii qaboobaa ee adduunka.
Image caption Dadka qaar waxa ay aaminsanyihiin aragtiyo kala duwan oo ku saabsan dilka
Waxaana jira su'aalo badan oo laga qabo illaa heerka hay'adaha sirdoonka Maraykanka FBI iyo CIA ay ka warhayeen dilka madaxweynaha.
Lahaanshaha sawirka National Archives
Image caption Qaar ka mid ah qoraalada sirta ah ee lasoo bandhigay
Waxaa ka mid ah wargeys British ah oo la wacay 25 daqiiqo ka hor intii uusan dilka dhicin, taas oo lagu wargaliyay in 'War Weyn' uu ka dhici doono Maraykanka.
Sidoo kale hay'adda sirdoonka FBI ayaa booliiska Dallas uga digtay in uu jiro qorshe la damacsanyahay in lagu dilo Lee Harvey Oswald oo loo haystay dilka madaxweynaha.
Waxaa kale oo jiray in atariisho caan ah oo ka tirsan shirkadda Hollywood su'aalo laga weeydiiyay xaflado tamashlayn ah oo ay kala qeybgashay madaxweyne Kennedy.
Image caption Dhawr boqol oo diiwaano siro ah ayaanan wali la shaacinin
Hay'adda sirdoonka CIA waxa ay ku doodaysaa in boqolaal cajaladood iyo qoraalo ku saabsan wixii dhacay ay wali qarsoonaadaan, maadaamaa ay wax u dhimayaan amniga Qaranka Maraykanka.
Dadka qaar ayaa qaba in hay'adaha sirdoonka ay qarinayaan qaladaadkii ay iyagu galeen.
militariga Mareykanka oo joojiyay taageerada ciidammada Liibiya
Masaajiddo ku yaal Mareykanka oo loo hanjabay